Saripika tena izy momba ny phablet Meizu M3 MAX | Androidsis
Sarin'ny Meizu M3 Max, smartphone izay hifaninana amin'ny Xiaomi Mi Max
El Xiaomi MiMax is the phablet avy amin'ny mpanamboatra sinoa Ampiasaina tanteraka izy io hamerenana ireo karazana atiny multimedia tsy misy very na dia iray aza kalitao. Ity karazana efijery sy fitaovana ity dia misy mpanaraka bebe kokoa ary noho io antony io no ahitantsika ireo mpamokatra maro kokoa mandray ny filany manokana hifaninana amin'ireo izay saika maka ny zava-drehetra ao amin'ny tsenan'ny phablet.
Raha vao natombok'i Xiaomi ny Mi Max, a Fitaovana 6,4 mirefy eo amin'ny efijery, Meizu dia vonona ny hanao izay sarotra amin'ny Xiaomi miaraka amin'ny M3 Max. Fitaovana iray izay mety ho hitantsika ao amin'ny foara IFA any Berlin, amin'ny 5 septambra, ary hitarika antsika any amin'ny phablet hafa handinika raha toa ny anay ny atiny multimedia izay averina isan'andro isan'andro avy ao amin'ny terminal.
Ny zavatra mahatsikaiky amin'ity phablet ity dia ny fampatsiahivana kely tamin'ilay Nokia E71 razambe, na dia eto aza isika dia hanadino ny atao hoe QWERTY keyboard. Ireo tena sary izay an-tanantsika dia manaporofo tsara fa hanaraka fitaovana hafa toa ilay voalaza etsy ambony hoe Mi Max, na dia tsy mamela izany fifandraisana manokana an'ny Nokia izany aza.
Avy amin'ny sary dia azonao atao ny mahita ny solomaso tokana ao aoriana miaraka amin'ny tselatra hita eo ambany sy vitsivitsy fotsiny bezel eo anoloana aloha; zavatra somary mahazatra ao amin'ireo telefaona ireo izay tonga avy any Sina. Mahavariana ireo tarika roa, ny iray eo ambony ary ny iray eo ambany, izay mampiavaka an'ity telefaona ity, farafaharatsiny kely, avy amin'ny hafa.
Avy amin'ny masontsivana dia mifikitra amin'izany izahay vita vita amin'ny vy, ny sensor fantsom-baravarana eo aloha, ny 4 GB RAM, ny tahiry anatiny 32 GB ary ny processeur Helio P10 handeha amin'ny vidiny $ 270 eo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Sarin'ny Meizu M3 Max, smartphone izay hifaninana amin'ny Xiaomi Mi Max
Bebe kokoa ny sary mivoaka mampiseho ny Sailfish Nexus